Ngaba kukho ikamva eluthandweni? | IBezzia
UValeria Sabater | | Psicología, Psychology kunye nesibini
Ngokuqinisekileyo amaxesha amaninzi uvile ukuba «sasikhona umiselwe sazane ". Ingxelo eqhelekileyo phakathi kwabo bantu bathanda ukucinga ukuba ubudlelwane babo, kude kube yinto eyenzekileyo, bunoyilo lwekamva labo. Ukuthanda umntu okanye ukuziva umthanda ngamanye amaxesha kusenza ukuba sidlule kulombono wokuthandana ukungena phantse "kumlingo",
Kufanelekile ukuba siphicothe kuzo zonke ezi zakhiwo zeentsomi namhlanje, ukusuka kwindawo yokujonga, ukuzihlalutya ngokweenkcukacha. Sonke siyazi ukuba sidibene ngokukodwa neqabane lethu, kodwa kude ekuntywilisweni kuphela kuloo mbono womlingo kunye nokhethekileyo, kukho isidingo sokugcina iinyawo zethu emhlabeni ngalo lonke ixesha. Sonke sinendawo emiselwe ikamva, akukho mathandabuzo. Kodwa ungaze ulibale ukuba siphawula ikamva ngokhetho lwethu, nge izigqibo zethu. Kwaye uyakuhlala unalawo amandla okukhetha ukuba uthanda bani, ufuna ukwabelana nabani ngobomi, kwaye ngubani omele umshiye ukuba awonwabanga. Ke makhe sijonge yonke le mibono ikhethekileyo ngothando.
1 Umsonto womlingo wekamva eluthandweni
1.1 1.Ithiyori yolungelelwaniso
1.2 2. Ithiyori yemitya ebomvu ebomvu yekamva
2 Ikamva lethu
Umsonto womlingo wekamva eluthandweni
Unokucinga ukuba ikamva ngokwalo elikuphosa iileta zothando. Lowo ugqiba ukuba uyibeka njani kwaye nini indlela yakho kuloo mntu uya kuba yinxalenye yobomi bakho. Ukuba nalo mbono akukho nto imbi, kodwa kufuneka silumke. Ukushiya into ebaluleke njengobudlelwane bethu obunobuchule ezandleni zezinto ezimiselwe ukubakho, ngandlela thile, ukuba thina ngokwethu siyeke ukuba namandla okwenza izigqibo kwinto eyenzekayo ebomini bethu. Kufanelekile ukulinganisa izikali emva koko. Vumela ikamva likukhohlise, kodwa uhlale unguye okhethayo kwaye ogqiba isigqibo.
Ngaphakathi kolu hlobo "lukhethekileyo" lothando, kukho iingcamango ezimbini ezinomdla wokuzikhumbula kwaye ngokuqinisekileyo ziya kukwenza uncume. Qaphela:
Akukho thuba, kukho ukungqinelana. Le ithiyori yayisele ichaziwe ngelo xesha ngu UCarl Gustav JungLo gqirha wezifo zengqondo kunye nochwephesha kwezengqondo wayengumanduleli kuSigmund Freud wendlela yokusebenza kwengqondo, nangona umbono wakhe wesayensi uhambe kancinci.
UJung wayedla ngokuthetha ngokungqamana nonxibelelwano olukhethekileyo nolusondeleyo phakathi komntu kunye nokusingqongileyo. Ngamanye amaxesha imikhosi enomtsalane iyenziwa de iimeko ezidibeneyo zenziwe. Njengokuba unokuba ngumzekelo wokucinga ngegama, kwaye, ngequbuliso, ukubona elo xesha kwipowusta yentengiso. Ukwenzela yena ukungaqondani kwezinto kwakungekhoKodwa ewe, abantu kufuneka balamkele kakhulu ilizwe elibangqongileyo ukuba bazive zonke ezo zinto zinokunxulumana nathi. Kwiminyaka kamva, le ndlela yayiza kuqala ukunxulumana nezinye ithiyori ze-physics ye-quantum. Inxalenye yesifundo esinqwenela ukuba, ngokutsho kwakhe, singasikhokelela kwisigqibo sokuba abantu abazani ngamabona-ndenzile. Ngamanye amaxesha, umxholo osingqongileyo ubekwa phambili ukuze, ngokulula, le ntlanganiso yenzeke.
2. Ithiyori yemitya ebomvu ebomvu yekamva
Ithiyori ye Umsonto obomvu Kunika umdla kule meko. Inomxholo wayo kwinkolelo yesiko laseMpuma Asia, kwaye imiselwe kakuhle phakathi kwabantu baseJapan. Umbono wakhe usekwe kwinto yokuba ekuzalweni, sele simiselwe kwangaphambili ukuba ngubani ekufuneka abe liqabane lethu. Kwaye olu manyano lusekwe ngomsonto ongabonakaliyo, umsonto obomvu.
Ngaphakathi kwale ntsomi yasempuma oku kuchongwa ngombono wokuba kukho umthambo okhokelela kumnwe wethu omncinci uye entliziyweni yethu. Kwaye emva koko, ibotshelelwe ngomsonto obomvu kuloo mntu umiselwe kwangaphambili ukuba liqabane lethu elithandanayo. Yimbophelelo ehlala ikhona. Akunandaba nokuba kuthatha ixesha elingakanani ukuba aba bantu babini badibane, kodwa loo mzuzu uya kwenzeka ngelinye ixesha ebomini bethu kungekudala okanye kamva.
Xa loo ntlanganiso iqhubekile, asinakuze sihlukane. Ubophelelo sele bomelele kwaye loo msonto sele ucocekile. Ukuba siyahamba siya kuziva a idola ayinyamezeleki ...
Siyavuma. Zonke iimbono zangaphambili zinomtsalane kwaye ukukholelwa kuzo kwenza ubudlelwane bethu bomlingo ngakumbi kwaye bukhethe. Kodwa izinto ezininzi kufanelekile ukuba zikhunjulwe. Ukukholelwa kwikamva ngendlela yentsimbi kusenza silahlekelwe ulawulo oluthile kumdiliya wethuukuya. Kwaye ke umngcipheko. Ungaze ulahlekelwe ngumbono ngobomi bakho nakubudlelwane bakho. Musa ukubeka iingxaki ezikhoyo kwizinto zangaphandle, okanye ushiye iimeko ezinento yokwenza nawe ezandleni zobonelelo.
Ukugcina ubudlelwane obuqolileyo, obuzinzileyo kunye nokonwaba, kufuneka sihambelane kwaye Abanini bezabelo zethu. Uthando ngokungafihli nolungelelwano, nguwe okhethe umntu oyinxalenye yobomi bakho kwaye ekufuneka adlale ngawo onke amaxesha ukuba wonwabile okanye awonwabanga. Okwangoku awukho, uthathe isigqibo ngamanyathelo oza kuwathatha. Kodwa ungaze unikezele okanye ushiye ezandleni "zento engabonakaliyo okanye engaphathekiyo" ukhetho ekufuneka ulwenzile.
Ukukholelwa kwezi ngcamango kulungile kwimbono yenkcubeko. Ukusuka kwindiza enomdla kunye ne-anecdotal. Kodwa uthando, ubudlelwane bobuqu kunye neemvakalelo zinobuzaza obunzulu kakhulu ekuphulukaneni naluphi na uhlobo lolawulo malunga nokwenzekayo kuthi kunye noko siziva. Kuya kuhlala kukho ukudibana okuqhelekileyo. Izinto ziya kuhlala zisenzeka ukubaleka ukuqonda kwethu, ubomi ngamanye amaxesha bunemidlalo yayo, kodwa khumbula: yiba ngumnini wesiphelo sakho ngalo lonke ixesha ngamandla akho okhetho. Khetha eyona nto, vuyisa intliziyo yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Psicología » Ngaba kukho ikamva eluthandweni?
Xa uthando lunikwa akukho ndlela unokukhetha kuyo, umthanda nje loo mntu kwaye akunakwenzeka ukuba ulibale okanye uyeke ukubathanda. Olu hlobo luthando lukwenza uzive wonwabile ngohlobo lokuba ungafuni ukuphulukana nolo luvo lukhethekileyo. Ndicinga ukuba kukho iindlela ezininzi zothando. Ukufika kokwenyani niyamazi kwaye nimamkele.
UValeria Sabater sitsho
Kukho iindlela ezininzi zothando, kwaye akukho thando lunye. Unyanisile uPepe. Enkosi kakhulu ngokufunda kunye nemibuliso evela kwiqela liphela.
Phendula uValeria Sabater
Kuyinyani, xa uthanda uthanda nje, kuyamangalisa ukucacisa kodwa ndadibana neqabane lam lokugqibela endandinonxibelelwano olufanelekileyo kodwa ukuba izinto zangaphandle kwakufuneka sahlule kwinyanga ephelileyo, kubuhlungu uku kude kakhulu kuye kodwa sisathetha x nge-Intanethi ..
Akukho lula kodwa ndiziva ngathi kungekudala siza kudibana kwakhona.
Inamba ebhabha sitsho
Molweni, nidibene kwakhona?
Molo Valeria, kubonakala ngathi uyaziphikisa, uthi umsonto obomvu ubamanyanisa abantu ngonaphakade kuba babemiselwe ukumanyana, kodwa ke ekugqibeleni uthi ukwahlukana kuvelisa iintlungu ezinganyamezelekiyo? Ke intambo ebomvu ayikho, nditsho, kuba kungenjalo abo bantu babini ngekhe bahlukane !!!! Ungandicacisela yona? Enkosi
Molo Valeria, ndikubhalele kodwa andazi ukuba ndiye kuwe. Ndithi kuwe kwakhona: ukuba umsonto obomvu ubamanyanisa abantu abamiselwe ukuba babekho, kutheni ke ekupheleni kwenqaku usithi ukwahlulwa kubangela iintlungu ezingathethekiyo? Ke ayenzelwanga ukuba babe kunye !!!!
Injani into ?? : babedalelwe okanye bebengazimiselanga ukuba kunye ??? Uyaziphikisa kwinqaku !!!
Ukuba ungandiphendula, enkosi
Hugo, ungumntwana kakhulu: izinto zangaphandle zasahlula !!! ??? Kungekudala siza kuphinda simanyane kwakhona !!!!! ???
Ukuba phakathi kwakho bekukho uthando oluninzi njengoko usitsho, ngekhe bahlukane. Yiza emhlabeni, uyeke ukubhabha, yayingelo thando olo! Libala ngaye !! Ukubulisa
Ukuqokelelwa kweelingerie, ukuwa-ebusika 2014-2015
Izicathulo zepati ezipinki